होसियार ! यी ५ खानाको बढी सेवनले निम्त्या`उँछ `क्यान्सर जस्तो खत`रनाक रोग – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/होसियार ! यी ५ खानाको बढी सेवनले निम्त्या`उँछ `क्यान्सर जस्तो खत`रनाक रोग
तारेको खानेकुरा बढी खाइयो भने शरीरमा एक्रिला`माइड नामक तत्वको सञ्चय बढ्छ, जसले पुरुषमा सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता कम गरिदिनेदेखि क्यान्सर लगाउनेसम्मको जोखिम बढाउँछ । उसिनेको खानामा एक्रिलामाइड तत्व कम हुन्छ । त्यसैले उसिनेको परिकार लाभदायक हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
दिनमा छ ग्राम भन्दा बढी नुन खानु हुँदैन । नुन बढी खाने गर्नाले उच्च रक्तचाप र हृद`या`घातको मात्र नभई क्यान्सरको जोखिम पनि बढी हुन्छ ।
बोसोयुक्त मासु र जनावरको बोसो हालेर बनाइएको चिज, बटर जस्ता खाना भरि`सक्के खानु हुँदैन । यस्ता खानाले क्यान्सर हुने जोखिम बढाउँछन् । मासुको सट्टा माछा खानु उपयुक्त हुन्छ ।
रक्सीको लत लागेको छ भने दुई पेगभन्दा बढ्ता नखाने गर्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । बढी रक्सी खाने गर्नाले मुख, पाठेघर र स्तनसम्बन्धी क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुन्छ । त्यसै चुरोट खाने मानीसलाई फो`क्सोमा क्या`न्सर हुने सम्भावना बढि हुन्छ ।